Egwuregwu ski ma ọ bụ enyo ebe m ga-amalite? - ULLER
Ọ bụrụ na ị ka na-eche echiche, n'oge a n'oge, maka ịmalite egwuregwu egwuregwu oge oyi, ọ gaghị egbu oge iji nyochaa mmasị gị mgbe ị na-ahọrọ ebe ị ga-amalite, họrọ ụdị nke ga-akacha mma maka gị wee ghọta ma ọ bụrụ na ị ga-ebu ụzọ zụta nke gi Iko ugo ma ọ bụ gị snow ugogbe anya.
Ihe mbu i kwesiri ima, ma i ghaghi ima nke oma, bu na ha abuo bu ndi egwuregwu na snow, mana na ha di iche, dika akuru na ngwa ndi ichoro ime ha. Karịsịa, n'isiokwu a, anyị na-anwa ịkọwa ọtụtụ ọdịiche dị mkpa n'etiti ịgba ọsọ na ịgba ọsọ. snowboarding. Na nke a, ị ga-enwerịrị ya ihe doro anya mgbe ị na-ahọrọ n'etiti abụọ ndị a.
Isi ihe bụ na, na ị maraworị ya, na ị na-agba ọsọ ị nwere bọọdụ n'ụkwụ ọ bụla na snow ị na-eme ya n'otu bọọdụ. N'ime usoro abụọ ahụ, a na-eme ahụ n'otu ụzọ ahụ, agbanyeghị na omume mmegharị, usoro na uru elere dị iche.
Guo ma chọpụta ntakịrị ihe gbasara ụdị ọzụzụ ọzụzụ snow ndị a dị ka ịhọrọ nke kachasị mma Iko ugoma ọ bụ gị snow ugogbe anya!
Kedu ka ski dị?
El skai Ọ bụ ihu ọma egwuregwu ugwu nke gụnyere usoro mmụta na-adabere nke ukwuu na omume anụ ahụ na nke uche nke skier. Maka ndị mbido, ọ ga-adị mma ibido site na mkpọda ugwu na-adọtịghị adaba, dabara adaba maka ha.
Ka oge na-aga, onye ahụ na-enweta obi ike ma na-atụ egwu site na mkpọda ugwu dị ukwuu, nke ha nwere ike ịnweta ụzọ dị oke ọsọ nke na-enye ha ohere ịzụ ikike njikwa ha. Onye na-egwu ski, ọkachasị, na-azụ ahụ dị ala nke ahụ ya yana, na obere, akụkụ ahụ dị elu. Onye na-egwu mmiri ga na-ebu ngwa ọrụ niile dị mkpa iji rụọ ọrụ, gụnyere nke ọma Iko ugo.
Ebumnuche bụ iji nweta omume, nka, ntụkwasị obi na njikwa zuru oke iji nwee ike imeri enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ihe atụghị anya na-adakwasị gị, na-elekwasị anya na gburugburu ebe obibi mgbe niile, na ihe egwu niile mgbochi niile dị na ugwu ahụ. . N'echiche a, ịgba ọsọ nwere ihe njem pụrụ iche nke nwere ike bụrụ snow enweghị ma ọ bụ, agbanyeghị, a na-eme ya n'ụzọ ọzọ.
Kedu ka Snow dị?
Ihe ngbenye n ’snow na-arụ ọrụ ọfụma, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, na obere akụkụ nke onye ahụ. Ọ chọrọ nguzozi na nhazi nke mmeghari karịa ịwụda mmiri, ọkachasị n'oge usoro mmụta, ebe ibu niile na-adaba na obere ala (bọọdụ) na enweghị ogwe nkwado. Nke a pụtara na na mbụ ị ga-anọ oge buru ibu n’elu ala.
N'ọnọdụ ọ bụla, iji omume zuru oke, snow dị mfe karịa ịgba ọsọ n'echiche nke na ị nwere naanị otu bọọdụ na usoro niile dị na ya, mmegharị ahụ abụghị nke ọkaibe dịka ọ gbasara ndị na-egwu ski. Inweta nkà ndị dị elu na snow dị mfe na ngwa ngwa karịa ịgba ọsọ.
N'ezie mgbe nke a gasịrị ị ga-eche ...Ma olee otu freeride?
Ọnọdụ 'freeride' mejupụtara ịhapụ ugwu ski iji chọta ebe nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ebe ị nwere ike ibi oke oke, anụ ọhịa na ezigbo ahụmahụ. Attractivezọ a mara mma, nke ndị na-egwu skiers na-amụbawanye na afọ ndị na-adịbeghị anya, mere ka akụkụ nke ọha a pụọ ​​na ebe a na-eme ski ebe ọ bụ na ha kwenyere na ịchọ ndụ maka onwe ha ka mma ịchọta ebe dị mma iji dọọ ịdọ aka ná ntị a. . Stationsfọdụ ọdụ ụgbọ azaghachiwo na nke a, dị ka Vallnord ma ọ bụ Grandvalira, oghere ndị na-emepe emepe maka ndị nweere onwe ha mana nke nwekwara ngwaọrụ nchekwa ha na ụlọ akwụkwọ ebe ha nwere ike ịmụ iji kwaga na-amaghị nwoke.
Anyị na-ekerịta vidiyo a dị mma nke mere na enweghị obi abụọ ihe ịgba ịnyịnya dị ọcha ma dịkwa mfe.
Ọ bụrụ na ị nọ na-eche ... Arcalís, na ọdụ ụgbọ Vallnord, bụ otu n'ime amaokwu kachasị mkpa na sker freeride N'ihi na ọnọdụ ya zuru oke maka nchebe okike megide ifufe, maka ihe karịrị njem njegharị 130 nwere ike nakwa n'ihi na ebe ahụ na-agba afọ iri abụọ na-enye ọhụụ n'okpuru usoro a. Ekwesiri ighota na kwa afo, na Vallnord, FWT ma obu Njem Ulo Ala Freeride.
Grandvalira, maka akụkụ ya, emelitere iji nye ndị ọbịa ya ezigbo freeride skiing. Ha emeela asọmpi Grandride ma banye na sekit ịgba ọsọ ski mba. Ha emepewokwa Freeride Center, ngalaba ọhụrụ nke ụlọ akwụkwọ ha, nke pụrụ iche na mkpụrụedemede-na-enye ma otu ma otu. I nwekwara ike ikpori ndụ na Grandvalira nke ngwugwu Ski Safari, puta na ndi nlekota ndi okacha amara nke soro gi na njem kacha mma.
N'ezie, Ngwakọta Ọgụgụ Ọgụgụ nke Nnwere Onwe bụ otu n'ime asọmpi kachasị na obodo a, nke na-achịkọta snowboard na freeski ndị na-agba ịnyịnya nke kachasị mma n'oge a na ebe ezumike ski Grandvalira.
El Tarter Snowpark na-aghọ ebe agha jupụtara na egwuregwu dị egwu na egwuregwu. Ihe omume a nwere 5-kpakpando dị iche iche nke World Snowboard Tour na ụdị ọla edo nke okirikiri AFP (ọkachamara freestyle circuit), na-abụ otu n'ime ntinye akwụkwọ nhọpụta na kalenda ụwa maka ịdọ aka ná ntị nke slopestyle.
Egwuregwu snowboard na ọnọdụ slopestyle, bụ nke kachasị mkpa na ndịda Europe site n'enyemaka nke ndị na-agba ịnyịnya nke ọkwa kachasị elu. Ihe omume a ejigidela kpakpando World Snowboard nke ise (sitere na kpakpando isii nwere ike), nke enyere ya.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na snow, nke skai ma ọ bụ freerideNdị a bụ ezigbo ezigbo saịtị ebe ị nwere ike ịbanye na ntanetị. Ma ọ bụrụ na ị na-eme ya ebe ọzọ na-amasị gị, egbula oge ịkọrọ ya anyị! Na njedebe nke ụbọchị ọ baghị uru ebe ị bidoro, ihe dị mkpa bụ ịhụ anyị ka anyị na-eme ihe!
Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ na-agbanwe ná ndụ gị ugbu a ma ị kabeghị ya na ndepụta nke omume gị, mmiri nwere ike ịbụ oge kachasị mma iji kwalite. Anyị na-enye gị uru ndị dị n'okpuru
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ iko igwe ịgba agba maka ụzọ ọzọ ị ga-aga n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'ugwu, anyị ga-agwa gị akụkụ ndị ị kwesịrị iburu n'uche tupu ị gbakwunye ngwaahịa na ụgbọ ibu azụmahịa.
Gba ịnyịnya ígwè bụ n'ezie ihe ịtụnanya. Naanị ka ikuku na-efe na ihu gị ka ị na-agagharị na ụfọdụ ebe mara mma na Spain ma ọ bụ ụwa ... Nọgidenụ na-agụ ma chọpụta ndị bụ
Nchịkọta anyị nke ULLER SNOWDRIFT ® eji eme enyo eji teknụzụ kachasị elu na ngwa anya n'ụwa! Ha gụnyere sistemụ mgbanwe igwe magnet. You maara teknụzụ anyị